Filipina : Ny Tranga ”Juana Change” ao amin’ny Youtube · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Oktobra 2018 8:22 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, Italiano, English
Ireo lahatsary fanesoana ara-politika ‘Juana Change’ no zavatra manaitra farany ao amin'ny Youtube ao Filipina. Nampiakarina an-tambajotra tamin'ny volana farany teo ireo lahatsary [amin'ny teny filipianina] ireo rehefa nanohitra ny tolokevitra fanovana ny Lalàm-panorenan'i Filipina ireo vondrona mpikatroka ara-politika maro, izay toa nanome vahana ny fanalavàna ny fotoana itondran'ireo voafidy rehetra, anisan'izany ny an'ny Filoha. Noho ny Aterineto sy ireo haino aman-jery, lasa olona mahery fo tena malaza ao Filipîna i Juana (lalaovin'ilay mpanakanto Mae Paner).
Manoratra mikasika ny tranga ‘Juana Change’ ilay blaogera Pepe Diokno:
« Kintana tsy nampoizina no teraka tao amin'ny Interweb (Aterineto) tamin'ity volana ity : Vehivavy feno hery, mahafinaritra ary tena tsara tarehy i Juana Change, izay efa nanintona mpitsidika mihoatra ny 50 000 ny lahatsariny nandritra ilay herinandro voalohany tao amin'ny Youtube. Fampiatoana ny sary : Mpikatroka resy lahatra i Juana, izay mikendry ny hiampanga ny kolikoly sy ny fanovàna ny Lalàm-panorenana ny rakitsariny ».
Anarana tena miparitaka manerana ny vehivavy ao Filipina izany Juana izany. Manazava ny dikan'ny hoe “Juana Change” amin'ny teny Filipiana ny blaogy Lightandshade :
« Mampieritreritra antsika ny Juana Change….
Jereo ny iray tamin'ireo andiana lahatsary noforonina vondrona Filipiana maniry ny hihetsika, izay natao ho an'ireo mpampiasa aterineto manerana izao tontolo izao. Mampiasa ny fanesoana ara-politika izy ireo, ny teknolojia misy sy ny tontolon'ny aterineto mba hanazava ireo mpampiasa aterineto, manantena ny hiteraka aingampanahy ho amin'ny fiovàna izay ilaintsika rehetra.
Fitaovam-piadiana mandray roa ary mety hidika « Fiovàna, fiovàna » (mba hanehoana ny fanantenana, hitarika amin'ny hetsika) na koa hoe « Wala nang change » ( mba hanehoana ny fiononana) ny Juana Change, toy ny lazain'ny ekipa mpamokatra azy. Hamokatra fanesoana mikasika ny kolikoly ny mpamokatra ity lahatsary ity, toy ny fihetsiky ny zanaka vavin'ny jeneraly iray [ohatra], ary lohahevitra hafa ihany koa.»
Lasa nalaza avokoa ireo lahatsarin'ny Juana Change tamin'ny alalan’‘ilay lahatsary fanoherana ny fanovàna ny Lalàm-panorenana. Manazava ny hevitra manodidina ilay lahatsary voalohany ny blaogera J. Villanueva Cabrera :
Fanesoana mikasika ilay fanovàna ny Lalàm-panorenana izany; na ilay antsoina hoe ”Cha-Cha” ao Filipina. Miresaka mikasika ny fihetsika ihany koa, na raha amin'ity tranga ity dia ny « tsy fahampian'ny fanehoankevitra » avy amin'ireo Filipiana tsotra ity fanesoana ity. Mpilalao roa fototra no ao amin'izany : ny voalohany, vehivavy tia mandihy ny cha-cha miaraka amin'ny mpiara-mandihy aminy. Manamarika ireo Filipiana sasany izy, izay mpomba ny rariny sy ny tsara. Mpanao politika ilay ramatoa manga volo miaraka amin'ny mpiambina azy. Mampiasa ny cha-cha (ilay dihy) mba hanazavana tsikelikely ny tetikadin-dry zareo mba hanambakàna olona sy hampanekena azy ireo ny fanovàna ny lalàm-panorenana izy. »
Miresaka mikasika ny kolikoly sy ny fitantanan-draharaha any anaty birao ny lahatsary iray hafa an'ny Juana Change (“Fixer”) . Atty. Marichu Lambino no mpitsikera ity fizaràna ity ao amin'ny blaoginy toy izao manaraka izao :
Ny fahitako ilay lahatsary : ara-panahy, asidra, tantara tsara, resaka misosa. Ny fandikàna : mahay milalao fotoana tsara ilay mpilalao ary manana fomba fiteny maro. Maivamaivana nefa tena lavorary tsara ilay sehatra isehoan'ny tantara raha raisina amin'ny maha-fanesoana azy. Manome gadona manonga an'ity lahatsary ity ilay fanambarana, mirafitra tsara, tsy misy fitohizany. »
Maneho ireo « heloka » maro samihafa nataon'ny governemanta nasionaly amin'izao fotoana izao ity fizarana manokana ho an'ny Krismasy avy amin'ny Juana Change ity – “12 andro fahafaham-baràka” -. Ity, etsy ambany, lahatsary avy amin'ny Juana Change mikasika ny olana mampalahelo atrehin'ireo filipiana mpiasa mpila ravinahitra.
Midera ny Juana Change ny blaogy Memorandum Circular:
« Hery bebe kokoa ho an'ny Juana Change, sy ho an'ireo olona rehetra ao ambadik'ity majika ity, izay mahatonga azy ho velona sy mitombina toy izao… Mba ho afaka hanohy ny asanareo mahomby foana anie ianareo ary hiparitaka toy ny toaka manerana ity firenentsika andalàm-pialàna aina ity anie izy. Hiparitaka toy ny afo anie ny hafatrareo ary handoro ny tsy firaharahiana izay mameno ny Filipiana miaina ny taonjato faha-21. Tandremo tsara ny tenanareo, tsy tianay hisy zavatra ratsy hanjo anareo…. Mazava ho azy, nanelingelina olona tsy tokony ho nelingelenina ianareo ; raha ny marina, sahiko ny miteny fa nanelingelina olona maro manana ny maha-izy azy ianareo. Olona izay mety handray anareo ho toy ny loza mitatao….”